Wararka Dibadda – Shabakadda Amiirnuur
Maxaa Cusub Muxaadaraad Uncategorized Wararka Dibadda
Itoobiya oo Ka Hadashay Tallaabadii Uu Mareykanku Lacagta Uga Goostay.
Maamulka dalka Itoobiya ayaa markii ugu horreysay ka hadlay lacag badan oo ay bil iyo sannad walba ka heli jirta Mareykanka oo laga goostay todobaadkan horraantiisii. Xukuumadda Adisababa waxay walaac xooggan ka muujisay tallaabadaasi uu qaaday Mareykanka oo ay ku weysay dhaqaalihii lagu siin jiray la dagaalanka Muslimiinta oo ay […]
Maxaa Cusub Uncategorized Wararka Dibadda
Mareykanka: “Duullaanka Soomaaliya Waxaa Nooga Baxday $ 5.3 Bilyan 20ki Sano Ee Tagtay Natiijana Kama Heyno”
Dowladda Mareykanka ayaa quus aad u liidata ka muujisay duullaankeeda ay kusoo qaaday Soomaaliya oo socda muddo ka badan 20 sano, kaasoo hadba marxalad soo marayay. Xukuumadda Washinton waxay sheegtay in dagaalka Soomaaliya oo kaliya ay ku bixisay adduun lacageed oo gaaraya $ 5.3 bilyan 20-kii sano ee lasoo dhaafay. […]
Trump oo Ay Tacsi Soo Gashay.
Dowladda Maraykanka ayaa ku dhawaaqday inuu geeriyooday ninka ka yar Donald Trump madaxweynaha Maraykanka marka laga hadlayo caruurta la dhalatay. Ninkan geeriyooday ayaa magaciisa lagu sheegay Ropert Trump, waxaana todobaadkii aynu soo dhaafney oo idil ku jiray isbitaal ku yaala magaalada Newyork ee dalka Maraykanka. Trump ayaa shalay ku booqday […]
Wasiirkii Gaashaandhigga Itoobiya oo La Casilay Iyo Qowmiyad Kacdoonka Kusoo Biirtay.
Wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa waxay sheegayaan in xilkii laga qaaday Wasiirkii gaashaandhigga dalkaas, Lamma Magersa. War rasmi ah oo kasoo baxay Itoobiya ayaa lagu sheegay in Ra’iisulwasaare Abiy uu shaqada ka cayriyay Magersa iyadoo lagu eedeeyay inuu gudan waayay hawshiisa. Wasiirka la eryay ayaa markii hore ahaa nin […]
Wazaarada gaashaandhiga Mareykanka ayaa bishii July ee sanadkii 2019ka Stephen Townsend u magacowday taliyaha ciidamada Mareykanka ee Africa ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano AFRICOM, isagoo badalay Generaalkii ka horeeyey ee la oran jiray Thomas Waald Hauser ee dhiigyacabka ahaa. Warbaahinada caalamka oo warbixino kala duwan ka qoray magacaabista […]
Waxaa 29 sano laga joogaa markii ay burburtay dowladdii shuuciyadda ahayd ee Soomaaliya, taasoo ay duminteeda ka qeyb qaateen dowlado ay kamid yihiin Mareykanka kadib markii ay danahooda ka waayeen. Dhibaatooyinkii iyo dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka waxay fursad u siiyeen shisheeyaha iney duullaano kala duwan soo qaadaan iyagoo […]
Diyaarad xamuul ah oo ay leedahay Itoobiya oo Ku Gubatay Shiinaha.
Diyaaradda oo ay leedahay shirkadda Ethiopian Airlines xilligii ay gubanaysay u diyaar garowday duulimaad loo qorsheeyay oo ku wajahnaa Koofurta America. Inkastoo duuliyaha diyaaradda uu sheegay ineysan jirin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay haddana wuxuu tilmaamay iney gubatay. Diyaaradda ayaa ku burburtay madaarka caalamiga ah ee Shanghai, Arbacadii […]
Wasiir Ka Tirsan Xukuumadda K/Afrika oo Laga Helay Covid19.
Wasaaradda Caafimaadka ee dowladda Koonfur Afrika, ayaa sheegtay in wasiirka wasaaradda shaqada dalkaasi Thulas laga helay xanuunka COVID-19, kadib markii baaritaan lagu sameeyay jimcadii shalay. War kasoo baxay wasaaradda shaqada ee dalkaasi ayaa lagu sheegay in wasiirku uu hadda isku karaantiilay gurigiisa, halkaasna uu kasoo shaqeyn doono. Sida ay warbixintu […]
In ka badan 100 qof oo ku dhintay kacdoonada Itoobiya. (Warbixin)
Qowmiyadda oromadu, wali kama suulin kacdoonadii xoogganaa ee ay ka waday magaalada Adisababa iyo gobolada kale ee ay ka degto dalka Itoobiya. Kacdoonadan oo ka dhashay nin iyaga ka soo jeeda oo ay bartamihii todobaadkii lasoo dhaafay dishay qowmiyadda kale ee Amxaarada ayaa waxa uu sababay khasaarooyin kala duwan. Illaa […]
Ku Dhawaad 10 Qof oo Ku Dhintay Qarax Ka Dhacay Itoobiya.
Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay qarax maanta oo Khamiis ah ka dhacay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya. Qaraxan oo xoogganaa islamarkaana aan faahfaahin laga bixin waxa uu yahay ayaa gallaaftay nolosha 8 Itoobiyaan ah. Dhacdadan ayaa ka dhigan iney sii korortay dhimashada ka dhalatay kacdoonada muddada […]